अधुरो रह्यो प्रख्यात सर्जनको नेपाल फर्केर सेवा गर्ने सपना – Health Post Nepal
अधुरो रह्यो प्रख्यात सर्जनको नेपाल फर्केर सेवा गर्ने सपना
२०७७ भदौ १८ गते ६:३१
अलबिदा डा. सुजीतकुमार
डा. सुजीतकुमार साह (बायाँबाट दोस्रो लहरमा)सहित प्रत्यारोपण टोलीका साथमा डा. रुपनारायण साह (दायाँबाट दोस्रो) डा. रुपनारायणको कलेजो प्रत्यारोपण सफल भएपछि सामूहिक तस्बिर खिचाउँदै ।
चिकित्सा विज्ञानमा जटिलमध्ये कलेजो प्रत्यारोपण शल्यक्रियामा ख्यातिप्राप्त संस्था भारतको मेधान्ता अस्पतालकै रोबटिक सर्जरी सुरुवातको दिन विशेष थियो। छोटो अवधिमै यो विधामा ख्याति बढाइरहेको मेधान्ताको पछाडि एक पात्र थिए, चिकित्सक डा. सुजीतकुमार साह।
त्यो संस्थाका लागि यति ठूलो सफलताको हिस्सेदार बनेका डा. साह मंगलबार आफू बस्दै आएको अपाटमेन्टको आठौं तलाबाट खसेर बिहान ३ बजे मृत अवस्थामा भेटिए प्रहरीले साहले आत्महत्या गरेको आशंका गरेको छ।
३९ वर्षे साहको क्षमता र ख्यातिलाई नजिकबाट चिनेका चिकित्सकहरुले दिनभर सामाजिक सञ्जालमा मृत्युको खबर अप्रत्यारिलो भन्दै दुःख व्यक्त गरे। ‘फेसबुकमा विभिन्न चिकित्सक साथीका पोस्टबाट थाहा पाएपछि मैले मेधान्ताकै
चिकित्सकलाई फोन गरेर सोधें, सिंगो मेधान्ता परिवार शोकमा थियो,’ साहलाई नजिकबाट चिन्ने फिजिसियन डा. रूपनारायण साहले हेल्थपोस्ट नेपालसँग भने।
पुख्र्यौली घर बारा भएका डा. रूपनारायण र स्वर्गीय सुजीतबीचको सम्बन्ध पनि उनलाई लागेको रोगकै कारण जोडिएको थियो। चीनमा एमडी पढ्दै गर्दा ३० वर्षको उमेरमा रुपनारायणमा कलेजोसम्बन्धी वंशाणुगत रोग विलसन डिजिज पत्ता लाग्यो। बाँच्नका लागि कलेजो प्रत्यारोपणको विकल्प थिएन।
नेपालमा कलेजो प्रत्यारोपण उपलब्ध थिएन। जटिल र महँगो शल्यक्रियाका लागि मध्यमवर्गीय नेपालीको रोजाइ भारत नै हुन्छ। उनले पनि भारतमै कलेजो प्रत्यारोपण गर्ने तयारी गरे।
कलेज प्रत्यारोपण भारतमा पनि मेधान्ता र अपोलो सबैभन्दा चर्चित संस्था हुन्। सबै कुरा बुझ्दै जाँदा रुपनारायणले मेधान्ता रोजे। त्यसको प्रमुख कारण त्यहाँको शल्यक्रिया टिम थियो।
जति समय संगत गरें त्यो आधारमा उहाँका पढाइ, परिवारबाहेक अरु प्राथमिकता र लालसा भेटिनँ
डा. एएस सोइनको नेतृत्वको प्रत्यारोपण समूहमा डा. सुजीत प्रमुख चिकित्सकमध्ये एक थिए। तीबाहेक नेपालकै चिकित्सक डा. अनिशा तिवारी, डा. सञ्जयकुमार यादव कार्यरत थिए।
प्रत्यारोपणका लागि अस्पताल जाँदा आफ्नै देशका चिकित्सक टिममा छन् भन्दा रुपनारायणलाई भरोसा मिल्यो। त्यसमा पनि डा. सुजीत उनलाई बारम्बार ढाडस दिन्थे।
पछि फलोअपमा जाँदा पनि उनले सुजीतलाई भेटे। ‘आफूले भरोसा गरेर उपचार गर्न गएको अस्पतालमा एउटा नेपाली चिकित्सकको त्यो तहको हैसियत र ख्याति देखेर मनै खुसी हुन्थ्यो,’ डा. रुपनारायणले भने, ‘सुरुमा त पत्यारै लागेन। पछि दिनभर उहाँको सरल र मिलनसार व्यवहार झलझली याद आयो।’
पोखरास्थित मणिपाल मेडिकल कलेजमा छात्रवृतिमा एमबिबिएस गरेका डा. सुजीतको छात्रवृति बन्डपछिको प्राज्ञिक र व्यावसायिक गन्तव्य भारतमै भयो।
उनले पिजिआई चण्डीगढबाट जनरल सर्जरीमा एमएस (स्नातकोत्तर) गरे। अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिन (एम्स) बाट ग्यास्टेन्टेस्टाइन (पेट तथा पाचन प्रणाली) सर्जरी विधामा एमसिएच (सुपर स्पेसलाइजेसन) गरे। सामान्य क्षमताले यी कहलिएका इन्टिच्युटमा अध्यायन र तालिम सहज थिएन ।
एमसिएचपछि उनी सन् २०१६ मा मेधान्तासँग जोडिएका थिए। पछिल्लो समय उनी मेधान्तामा कन्सल्ट्यान्ट सर्जनका रूपमा कार्यरत थिए।
डा. सुजीत सर्जनको रूपमा कलेजो प्रत्यारोपण विभागमा काम गर्दागर्दै दक्षिण कोरियाबाट रोबोट सहायताबाट गरिने अत्याधुनिक रोबटिक सर्जरीको फेलोसिप गरेका थिए।
त्यसलगत्तै उनले मेधान्तामा रोबटिक लिभर ट्रान्सप्लान्ट सर्जरी सुरु गरेका थिए।
नजिकबाट चिन्ने र काम गर्ने अवसर पाएका चिकित्सकहरू शल्यचिकित्सामा डा. सुजीतको हात (सीप) को सहकर्मी र संस्थाभित्र निकै चर्चा पाएको बताउँछन्।
मेधान्तामा डा. सुजीतलगत्तै आबद्ध भएर गत वर्ष मात्रै नेपाल फर्किएकी प्रत्यारोपण सर्जन डा. अनिशा तिवारीले पनि डा. सुजीत निकै मिलनसार र कामप्रति निकै प्रतिबद्ध चिकित्सकको रूपमा पाएको बताइन्।
‘मेधान्तामा लिभर विभागमा हामी चारजना नेपाली थियौं, दुईजना नेपाल फर्कियौं, अब त्यहाँ डा. सञ्जय यादव कार्यरत हुनुहुन्छ, सुजीतको यस्तो खबर सुन्नुपर्यो,’ एक वर्षअघि नेपाल फर्किएर भक्तपुरस्थित मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रमा
आबद्ध भएकी प्रत्यारोपण सर्जन डा. तिवारीले भनिन्। मेधान्तामै कलेजो प्रत्यारोपण विषयमा फेलोसिप गरेका डा. जयन्त साह अहिले त्रिवि शिक्षण अस्पतालसँग आबद्ध छन्।
डा. सञ्जय सहज अवस्था हुँदाको समयमा मेधान्तामा कलेजो प्रत्यारोपण गरेर फर्केकाको फलोअपका लागि महिना–महिना दिनमा नेपालमा सेवा दिन्छन्।
‘सुजीतलाई मेधान्तामा पनि सबैले मन पराउँथे, नेपालबाट गएका एउटा चिकित्सकको हामी नेपाली चिकित्सकसँग त झनै राम्रो हुने भइहाल्यो,’ डा. तिवारीले भनिन्।
नेपाल फर्किएपछि कुराकानी नभए पनि मंगलबारको खबर सुनेर आफू निकै दुःखी भएको अनिशाले सुनाइन्।
मेधान्ताबाटै कलेजो प्रत्यारोपणसम्बन्धी फेलोसिप गरेर फर्किएका त्रिवि शिक्षण अस्पतालका फ्याकल्टी डा. जयन्त साहले डा. सुजीतको मृत्यु चिकित्सा क्षेत्रकै लागि ठूलो क्षति भएको बताए।
चिकित्साशास्त्र अध्ययान संस्थान (आइओएम) बाट जनरल सर्जरीमा एम र ग्यास्टोन्टेस्टाइन सर्जरीमा एमसिएच गरेका डा. जयन्तले पनि मेधान्तामा फेलोसिप गर्दा डा. सुजीतबाट विशेष केयर र सहयोग पाएको सुनाए।
राम्रो इन्स्टिच्युटको अध्ययन र तालिमबाट खारिएका सुजीतको अधिकांश भेटमा पनि व्यावसायिक सीप र प्रविधिकै कुरामा तल्लीन हुने गरेको सहकर्मी चिकित्सकहरू बताउँछन्।
डा. रुपनारायणले त सुजीतकुमारजस्ता ख्यातिप्राप्त चिकित्सकको सीप र ज्ञानलाई देशमा प्रयोग गर्ने वातावरण बन्ला कि भन्ने आशा राख्दाराख्दै नसोचेको अवस्था आएको सुनाए।
‘डा. सुजीत, डा. सन्जय र अहिले नेपाल फर्किसकेका डाक्टरहरूको क्षमतालाई प्रयोग गर्ने विशेष संस्था बनाउन सके बल्ल राम्रो हुन्थ्यो,’ डा. रुपनारायणले थपे, ‘यस्तै कल्पना गर्दागर्दै एउटा सुन्दर भविष्यकै अन्त्य भयो।’
‘जति समय संगत गरें त्यो आधारमा उहाँका पढाइ, परिवारबाहेक अरु प्राथमिकता र लालसा भेटिनँ,’ डा. रुपनारायण थप्छन्।
भारतीय पत्रिका टाइम्स अफ इन्डियाको अनलाइन संस्करणले प्रहरीलाई उद्धृत गर्दै डा. सुजीतको श्रीमतीसँग सम्बन्धबिच्छेदको मुद्दा चलिरहेको उल्लेख गरेको छ।
सरकारी चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. रविन खड्काले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेखेर केही दिनअघि कुराकानीका क्रममा साहले नेपाल फर्किने कुरा गरेको उल्लेख गरेका छन्।
खड्काले संसार नै हल्लाउने गरी रोबोटिक कलेजो प्रत्यारोपणमा विश्वजगतमा फैलाउँदै गरेका चिकित्सकले अस्पतालको क्वाटरबाट हामफालेर आत्महत्या गरेको कुराले स्तब्ध बनाएको जनाएका छन्।
‘उनीसँग भर्खर भएको कुराकानीबाट केही समयपछि नेपाल आएर सेवा सुरु गर्ने कुरा सुन्दा र मनन गर्दा उनले आत्महत्या गरेको कुरामा कत्ति पनि विश्वास लाग्दैन,’ डा. खड्काले लेखेका छन्।
उनले यस घटनालाई समेत हत्या भन्दै निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका छन्।
पछिल्लो समय भारतीय सञ्चारमाध्यमले उनले आत्महत्या गरेको र त्यसको कारण पारिवारिक सम्बन्धमा उत्पन्न बेमेल भएको आशंका गरेका छन्।
भारतीय पत्रिका टाइम्स अफ इन्डियाको अनलाइन संस्करणले प्रहरीलाई उद्धृत गर्दै डा. सुजीतको श्रीमतीसँग सम्बन्धबिच्छेदको मुद्दा चलिरहेको उल्लेख गरेको छ। डा. साहकी श्रीमती भारतीय नागरिक हुन्।
मुटुरोग विशेषज्ञ रहेकी उनीकी श्रीमती हाल इस्ट बंगालको एउटा अस्पतालमा कार्यरत रहेको प्रहरीले जनाएको छ।
प्रहरीले साहको अन्य व्यक्ति र स्थानीयसँग निकै कममात्रै बातचित हुने गरेको जनाएको छ।
साहको शव स्थानीय अस्पतालको मर्चरीमा राखेर नेपालमा रहेको परिवारलाई खबर गरिएको टाइम्स अफ इन्डियाको समाचारमा जनाइएको छ।
Tags: डा. सुजीतकुमार साह